Ngaba iikati zintakumba zingaluma abantu? - Iikati General Info
Ngaba iikati zintakumba zingaluma abantu?
Ngelishwa kubanini beekati ezirhawuzelelayo, iindaba ezimbi kukuba iintakumba zinokuluma abantu. Ngethamsanqa, ungathatha amanyathelo okuphatha iintakumba kunye nokuzisusa ekhayeni lakho, ukuvumela wena kunye nekati yakho ukuba nifumane uxolo olungenalusini.
Xa ikati fleas iluma abantu
Amathuba kukuba, uninzi lwabantu lubuza malunga naloiintakumbaebantwini baqaphele amabala amancinci abomvu aqaqambileyo ahla enyuka ngengalo okanye imilenze. Intakumba yekati ngokuqinisekileyo iyaluma abantu kwaye oku kunokwenzeka ngokulula xa ikati enesifo sentakumba ingena ekhayeni lakho. Unga ukufumana iintakumba ngokulula Ngokunxibelelana nekati yakho okanye iindawo ebezikhona. Iintakumba ziya kuthi xhaxhe emzimbeni wekati ziye kwifenitshala yakho, iikhaphethi, izinto zokulala, nakwibhedi yezilwanyana zasekhaya ngokunjalo. Banokutsiba kuwe ngelixa ikati yakho ikhonkotha ethangeni lakho kwaye uyayibamba. Kuba iintakumba zincinci kakhulu, kulula ukuziphosa njengoko zihamba malunga nekhaya lakho kwaye zixhumela kuwe nakwifenitshala yakho.
Iikhola zeKhola zeHolide eziFumana iKiti yakho eMoyeni
Kutheni ikati fleas iluma abantu
Iintakumba ziphila ngokusela igazi lazo, nokuba yikati, inja okanye abantu. Xa intakumba ifika kuwe kwaye idibana nolusu lwakho, kuyimpendulo yendalo kubo ukuba balume phantsi kwaye bondle. Ngokubanzi, iintakumba zikhetha 'imeko-bume' efumaneka kulusu nakuboya bekati okanye inja kodwa baya kukuvuyela ukusebenzisa ithuba xa benethuba.
I-Cat Fleas iluma kwiinja
Izilwanyana ezininzi ezinofikelelo lwangaphandle ziya kuthandafumana iintakumbangamaxesha ngamaxesha. Izinja zinokufumana iintakumba kunye neekati, kodwa umdla ngokwaneleyo, intakumba efumaneka kakhulu kwizinja yeyona ntakumba. Iintakumba zenja zinoxanduva malunga neepesenti ezintlanu zeentakumba, ke oku kwenza ukuba ikati izalise olona tshaba lukhulu kubanini beekati kunye neenja. Iintakumba zingena ezinjeni ekhayeni ngendlela efanayo nezingena ebantwini. Ukuba iintakumba kwikati zitsibela kwikhaphethi nakwifenitshala, baqinisekile ukuba bazokungena nasezinjeni zakho.
I-Cat Flea Bite Iimpawu zoLuntu
Ukuba ukrokrela ukuba ulunywe ziintakumba kwikati yakho, khangela ezi mpawu :
Amancinci amancinci abomvu kwesikhumba sakho, ahlala ehlangene ngamaqela angama-3 okanye ama-4
Ukudumba, iindawo ezibomvu ('halo') ezijikeleze amaqhuma abangelwa kukungavisisani
Ulusu olurhawuzayo kwaye ujikeleze amaqhuma
Ukulunywa kunokwenzeka naphi na kodwa amaxesha amaninzi zifumaneka emaqatheni, emilenzeni, ngasemva kwamadolo, kwi-groin, esinqeni, ekhwapheni nasemabeleni
Nangona kunqabile kakhulu, ukulunywa zizintambo kunokukhokelela kuninzi iimeko ezinzima Kubantu kubandakanya iintshulube ze tapeworm, typhus kunye ne bubonic.
Ingxaki kubantu abaneZilwanyana ezinobungozi
Ukulunywa kweekati kunokuba yingxaki enkulu kubantu abanesifo sokulunywa sisinambuzane. Kwiimeko ezinjalo, amachokoza amancinci abomvu abangelwa ziintakumba ayaxokozela abe ziziduli ezibomvu ezinkulu ezinokosuleleka. Ayitsho into yokuba kufuneka kwenziwe into ukulungisa le meko kuba iintakumba zihlala ziyingxaki ephindaphindayo. Iimpawu zabantu abaneempembelelo zokulunywa zizintsi zibandakanya:
Ukurhawuzela okugqithisileyo okujikeleze iindawo ezibomvu kulusu lwakho
Iingxaki zokuphefumla kubandakanya ukuvutha, ukuphefumla kancinci kunye nobunzima ngokubanzi bokuphefumla
Iingxaki zokuphefumla zinokuba zimbi ngakumbi kubandakanya iintlungu esifubeni
Ukudumba kwezinye iindawo zomzimba, ngakumbi ulwimi kunye nemilebe
Isihlunu kunye nesiyezi
Usulelo lolusu, oluhlala lubangelwa kukukrwempa kakhulu
Ukuphelisa i-Cat Fleas
Kukho iindlela ezahlukeneyo zokulwa ingxaki yokukhuphaza, kodwa abanini bezilwanyana kufuneka bazi ukuba eyona ngxaki ayizizo ikati lakho. Yipesenti encinci yeentakumba ezihlasela iingalo nemilenze yakho ezikhoyo kwikati yakho. Endaweni yoko, ikhaphethi yakho, iiragi, ifenitshala, kunye nezinto zokulala ukongeza kulwandle lwangaphandle zezona zinto zibangela ezi ntyatyambo. Njengokuba kanye olona luvo lwentakumba aluphazamisi ngokwaneleyo, iintakumba ziyazichasa ngokunjalo. Ilindle lentyatyambo likhangeleka njengamachaphaza amnyama amnyama okanye isanti, kwaye uyakufumana oku 'kungcola' kuyo yonke indawo ukuba awudibani nentloko yesifo sento.
Ukunyanga ikati yakho ngeentakumba
Uya kuqala ufunephatha ikati yakhongeUnyango lwentakumbangelixesha unyanga ikhaya lakho kunye negadi. Oku kunokuba nzima kuba awuzukukhathazeka nje malunga neentakumba eziphilayo, kuyakufuneka ugcine ulinde amaqanda abekwe kwisilwanyana sakho sasekhaya. La maqanda azimele kwiikhaphethi nakwiibhedi. Ukulungiswa okukhawulezayo okulula kukufowunela umtshabalalisi onokutshiza indawo yakho yangaphakathi nangaphandle, kodwa unyango olunye alunakwanela. Kuthatha iiveki ukuba amaqanda aqandusele, ke uya kufuna ukucwangcisa amaxesha amaninzi okulandela kunye nokugcina ikati yakhoamayeza othintelo rhoqo.
Ukuzinyanga ngokwakho ngeFleas
Ukuba iimpawu zakho zithambile kwaye awungekhe usebenze, unganyanga iintakumba zakho ziyaluma ngoncedo lokuqala olulula. Hlamba iindawo ezichaphazelekayo ngobunono ngamanzi ashushu kunye nesepha ethambileyo. Ukuba ukulunywa kudumbile, ungasebenzisa ipakethi yomkhenkce kwiindawo ezichaphazelekayo. Sebenzisa ioyile ye-anti-counter kunye ne-antihistamine kunye ne-hydrocortisone. Ukuba uqaphela naziphi na iimpawu ezibonisa ukungabikho komzimba, khangela unyango ngokukhawuleza.
Ukunyanga iKhaya lakho ngeZintsi zekati
Ngaphakathi kwekhaya lakho, uya kufuna ukucoca ngokucokisekileyo kwaye ucoce iidrafti zakho kunye nokulala. Nayiphi na indawo efudumeleyo ethambileyo ebonakala ngathi ihlala abantu kwiintakumba kufuneka ikrokrelwe, ke ngoko icocwe. Ukuba ngokwenene uyiloo nto uzenzele yona, CatsofAustralia.com ipapashe inqaku elihle ngokuchanekileyoUkupheliswa kwentakumba kubanini bezilwanyana. Le nkqubo ifuna ukwenziwa ngononophelo olukhulu kuba, xa uyenzile ngokungakhathali, uya kugqiba ubuyele kwisikwere esinye.
Tyala imali kwi-Vacuum enamandla
Uya kudinga isicoci esinzima sokucoca ulwelo ukujongana nedander kunye neentsalela zentsalela ezibangelwa kukusuleleka. Ukuba unako ukuyifumana, i IDyson yeZilwanyana eziVuthayo yenye yezona zinto zilungileyo zokuphefumla yonke into ukusuka kwizinwele zasekhaya ukuya kwiinkqubo eziqhubekayo. Ukucoca umatshini rhoqo ngomatshini osemgangathweni ngexesha kunye naphakathi kokutshatyalaliswa kweekhemikhali ngumgca wakho wesibini wokhuselo.
indlela yokufumana ibala ngaphandle kwehempe
Gcina isilwanyana sakho ngaphakathi
Ukuba ayisiyiyo idabi lakho lokuqala ngeentakumba zekati, ungaphinda ufune ukuvalela ikiti ngaphakathi. Uninzi lwabafuyi beekati abayi kuthengisa iikati kumakhaya akhuthaza ukuhamba-hamba kwezilwanyana zasekhaya, ngenxa yoko awuyi kuba wedwa kwimizamo yakho.Iikhola zentsimbiinokukunceda ngandlel 'ithile ukugcina iintakumba kwikati yakho kodwa azisebenzi nge-100%.
Ngelixa abanini beekati abaninzi bekhetha ukuya kwindlela ye-DIY xa ususa iiflethi ukugcina imali, ukungcola kwentakumba kunokuba nzima kakhulu ukususa endlwini yakho uwedwa. Ukuqesha umntu oza kuzitshabalalisa kungabiza imali eninzi kodwa kungakongela imali ekuhambeni kwexesha unciphise utyelelo kugqirha wezilwanyana kwikati yakho kunye neendleko zonyango ezincitshisiweyo. Oku kuyinyani ngakumbi xa unengxaki yokugula kwaye unengozi enkulu ekubanjweni. Umtshabalalisi unokujonga kwakhona ipropathi yakho ukuze afumane iindawo ozenzayo usenokuba ulahlekile , kwaye usebenzise iimveliso eziza kuchaphazela zonke iinkalo zomjikelo wobomi wentakumba. Ukuba unenkxalabo malunga nokuchazwa kweekhemikhali, xoxa nodokotela wezilwanyana onokubonelela ngokudluliselwa kweenkampani zolawulo lweentakumba kwindawo yakho ezikhuselekileyo ekhayeni lakho, kusapho lwakho nakwiikati.
Ukunyamekela ukuLunywa kweZintya
Zininzi izibonelelo ezintle zokuba nesilwanyana sasekhaya kodwa ukujongana neentakumba kunokuba yintlungu kwikati yakho kunye nezinye izilwanyana zasekhaya. Ukuba unayo ikati ephuma ngaphandle, umngcipheko wokuzisa iintakumba ekhaya uyanda. Qiniseka ukuba uyazi imiqondiso yokulunywa zizintakumba kuwe nakwikati yakho kwaye ungalibazisi ukuthatha inyathelo xa ukrokrela ukuba iintakumba zisendlwini yakho nakwisilwanyana osifuyileyo.
Amaqela Amaqela Ukufakwa Kwetattoo Amagama Onduduzo Emva Kukufa Izinja Imiboniso Yesilayidi Inja Impilo
indlela yokulahla ooqongqothwane iyeza lasekhaya
ungawasusa njani amanqaku e-scuff kumgangatho weplanga
yaqala nini ukwenziwa "twix" ilekese bar?
yintoni ekhawulezayo ngokubhaliweyo
ithini iminyaka esemthethweni yokuphuma
ukucoca izitena kwindawo yeziko
amagama amnandi amakhwenkwe aqala ngo-j